FILIM LAGU BEDDELAYO KORONTO IYO NOOCYO KALE OO DABOOLAN, QALABKA AAN LA ISTICMAALIN - DHISMAYAASHA
Maaddooyin kala duwan oo ku habboon qalabka aqalka dhirta lagu koriyo ayaa kor u qaadaya dhibaatada doorashada.
Si aan loogu qaldamin oo aysan lacag bixin lacag dheeraad ah, waa lagama maarmaan in la fahmo astaamaha mid kasta oo ka mid ah doorashooyinka la soo jeediyey.
Noocyada alaabta daboolka ah
Kuwa ugu caansan waa noocyada soo socda ee muraayadaha dharka loogu talagalay beeraha lagu koriyo iyo kuwa lagu koriyo: filimka fiilada iyo farsamada, muraayada iyo kuwa aan korin. Intaa waxaa dheer, iibka waxaa laga heli karaa wax soo saarka warshadaha.
Filimka dib loo habeeyay
Faa'iidada ugu weyn ee filimka xoojinta - xoogga sare ee qiimaha la aqbali karo marka la xiro saqafka aqalka dhirta lagu koriyo. Dhisid, filimka xoojinta wuxuu ka kooban yahay seddex lakab: laba lakab oo dabool ah oo ah polyetylen ama polypropylene, iyo sidoo kale hal lakab oo dhexda dhexe ah.
Si loo xoojiyo filimka waxaa loo isticmaalaa fibboorka. Iyada oo dhumucdiisuna tahay 0,2-0.3 mm, mesh fiberglass si guul leh ayaa u adkeysta inta badan sifooyinka gaar ah ee isticmaalka dhul bannaan. Sidaa darteed, filinka xoojinta waxaa lagu shaqeyn karaa heerkulka heerkulka laga bilaabo -50 illaa + 60 digrii, xawaare sarreeya oo kor u kaca ilaa 30 mitir halkii labaad. gudbinta iftiinka halka lagu badbaadiyey markay tahay 75%.
Doorashada filim xooggan oo loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo, waa inaad fiiro gaar ah u leedahay qodobbada soo socda:
midabka Filim huruud ah ama buluug ah ayaa ka wanaagsan inaanad u isticmaalin beerta. Shaybaarka noocan oo kale ah ma noqon karo mid tayo sare leh, ama loogu talagalay oo keliya ujeedada dhismaha. Midabka ugu fiican waa caddaan ama buluug;
cufnaanta. Wixii beerta dookha ugu fiican waa laga bilaabo 120 ilaa 200 g / m2.
Filimka sii xoogeysanayaa wuxuu ku yaalaa duubka iibka 15-20 m. Wareegga - qiyaastii 2 illaa 6 m.
Filim Polyethylene for a lagu koriyo ama aqalka dhirta lagu koriyo xilligan qalabka ugu raqiisan suuqa. Tan waxaa lagu gaaraa fududeynta wax soo saar. Polyethylene waxay leedahay heer sare gudbinta iftiinka (80-90%)Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay awood farsamo oo yar.
MUHIIM! Burburkii ugu weynaa ee faylaydhka wuxuu ku dhacaa qoob ka dhiska. Gabaygu waa inuu ka fogaadaa inuu bareelo 180 darajo.
Gogol-xannibnaanta, badanaa waxay isticmaashaa filim caag ah oo dhumucdiisu tahay 0.08-0.1 mm, kaas oo, si taxadar leh u isticmaalaan, si guul leh u shaqeynayaan hal ama laba xilli. Waxaa jira xulashooyin cufan, laakiin waa qaali qaali ah.
Nonwoven oo daboolaya alaabada lagu koriyo - xayawaannada qulqulatooyinka ayaa tilmaamaya qalabka ayadoo ay ugu wacan tahay tilmaanta tiknoolajiyada wax soo saarka. Nuxurkiisu wuxuu hoos u dhacaa qashinka polypropylene, oo ku duuban fiilooyinka polypropylene dhuuban iyo iyaga oo isku xidhaya. Siyaabaha lagu xiro ee soo saarayaasha kala duwan way kala duwanaan karaan, hase yeeshee marka ay soo baxaan waxa ay dhammaantood helaan wax isku mid ah: maro ka samaysan jilicsanaanta dhajiska ah.
Faa'iidooyinka ugu waaweyn nonwovens:
weyn xooga farsamada iyo dulqaad;
awood u leh inuu seego ma aha oo keliya shucaaca qoraxda, laakiin sidoo kale qoyaan;
kala duwan. Agrotextiles waxaa laga helaa cufnaanta 17, 30, 40 iyo 60 g / m2.
Waxaa intaa dheer, nonwovens way kala duwanaan kartaa midabka:
- cad, oo leh qiimaha ugu hooseeya iyo cufnaanta. Waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo dhaxan dambe, dhirta kuleylka kuleylka, iyo walxaha loogu talagalay koriyo ku meel gaar ah;
- mugdi (madow madow, bunni ama madow). Inta badan waxay leeyihiin cufnaanta 40-60 g / sq.m. Sababtoo ah awoodda mugdiga mugdiga ah si ay u kululeeyaan xitaa iftiinka iftiinka qorraxda, koriyo laga bilaabo qalabkan waa mid aan lagama maarmaan u ah koritaanka geedo hore. Intaa waxaa dheer, agrofabric madow waxay xiran kartaa sariiraha iyo goobaha cawska ah ee geedaha si loo ilaaliyo haramaha.
Taariikhda isticmaalka muraayadda loogu talagalay beeraha lagu koriyo waxay dib ugu soo noqotaa tijaabooyinka isdhaafsiga ee Peter I. Dhulka dusha sare ayaa leh faa'iidooyinka soo socda:
- Ku dhawaad ​​ma daahin ultraviolet looga baahan yahay dhirta;
- Waxay leeyihiin cillad aad u fiican oo la xakameynayo;
- ha badalin tayada jirkooda iyo cabbirka joomatariga leh heerkulka.
Si kastaba ha ahaatee, in aqalka dhirta lagu koriyo ee muraayadda ee beerta si dhif ah loo isticmaalo. Tani waxay sabab u tahay qiimaha sare ee alaabta lafteeda iyo baahida loo qabo in la abuuro muraayad adag oo hoos yimaada. Waxay xaddideysaa isticmaalka iyo naxdinta lahaanshaha sheyga.
Isticmaalka daboolka loogu talagalay daboolka loogu talagalay koriinka Nadaafado badan oo loogu talagalay beerta:
- daboolka si fiican loo tolay si loogu sameeyo koronto ayaa socon karta muddo dhowr sano ah;
- joogitaanka dariishado badan ayaa fududaynaya daryeelka dhirta iyo xaaladaha qaarkood waxay tirtirayaan baahida loo qabo in laga saaro aqalka dhirta lagu koriyo inta lagu jiro maalinta;
- Miisiinka kugu habboon wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ammaan ah u hagaajisid waxyaabaha ku jira qaabka.
Badhaafka ugu weyn Daboolida Warshadaha - iyaga kharash badan. Intaa waxaa dheer, daboolayaasha sida caadiga ah waxay leeyihiin qiyaaso go'an, taas oo adkeyneysa in ay ku isticmaasho shaxanka qaabeynta aan caadiga ahayn.
DAREEN! Haddii lagu dhiso aqalka dhirta lagu koriyo oo cusub, markaa waxa macquul ah in marka hore la barto qaybaha kala duwan ee daboolka. Tani waxay isla markiiba dhisi doontaa qiyaasta cabbirka la rabo.
Sida maaddada daboolka ah, filim kasta iyo shaati-baarisyo ayaa loo isticmaali karaa kaasoo gudbin kara inta badan shucaaca qoraxda. Sidaa darteed, bannaanka u inta badan leeyihiin haraagyada leh coatings sida:
- polycarbonate (gacanta iyo monolithic). Waxay leedahay tiro hooseeysa, si fiican u ilaaliso kuleylka, waxayna ku dhowdahay quraarad caadi ah marka la eego is-gudbinta iftiinka. Si kastaba ha noqotee, shayyadahani waxay bedeli karaan joomatari markay kululeeyaan. Sidaa darteed, waxay u baahan yihiin hab feker ah inta lagu jiro rakibidda;
- acrylic, oo loo yaqaan 'plexiglass' ama 'panlexiglass'. Awoodda u habboon si aad u leexiso ka dib marka aad kuleylka ka dibna ku hayso qaab aad u hesho, taas oo kuu oggolaanaysa inaad abuurto geedo lagu dhajiyo geedi socodka asalka ah. Khasaaruhu waa in si sahlan loo xoqo, taasoo saameyn karta nalalka iftiinka;
- Fiberglass Waxay ka kooban tahay saldhigga fibergoorka iyo rinjiga. Waxaa jira suurtagal ah in ay ku shaqeynayaan farsamooyinka farsamada gacanta. Maaddadu waa mid aad u xoog badan, waana mid deg deg ah, hase yeeshee si dhakhso ah ayaa loo nadiifiyaa
Waxaad daawan kartaa noocyada kala duwan ee alaabta daboolka ah iyo isticmaalka habboon ee fiidyowgan:
Sida loo daboolo?
Si dhakhso ah oo sax ah u daboolaan aqalka dhirta lagu koriyo, waa inaad si taxaddar leh u bartaa waxyaabaha ku jira maaddada daboolka ah ee la soo xulay oo ay ku xisaabtamaan inta lagu jiro shaqada. Tani waxay u oggolaaneysaa in ay si buuxda u muujiso kartida qalafsan ee daboolka ah iyo inaanay waxyeelleynin inta lagu jiro rakibidda.
Si loo dedejiyo oo loo fududeeyo geeddi-socodka, waa inaad taxadareysaa qodobbada soo socda:
- inta aan dhismuhu bilaabmin diyaariso qorshe faahfaahsan;
- waxaad u baahan tahay inaad hore u sii bixiso helitaanka alaabta oo leh marin;
- qaab dhismeedka aqalka dhirta lagu koriyo waa in uu la socdo qaado miisaanka daboolida alaabta.
Maadaama daboolka aqalka dhirta badankoodu aysan ku kala duwanayn awoodda, waxaa lagama maarmaan ah in ay si taxadar leh ula shaqeeyaan iyaga.
Ku rakibidda aqalka dhirta lagu koriyo oo aad adigu gacmahaaga u leedahay waa dhacdo laga heli karo beerta wax kasta oo leh xirfado yar oo dhismaha ah. Si ay u guulaystaan, waxaa habboon in hore loo sii barto ugu yaraan macluumaadka ku saabsan beerashada aqalka dhirta.